नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपालमा चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुको सामुहिक बिज्ञप्ती, सर्बोच्च अदालत माथि दबाबै दबाब !
नेपालमा चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुको सामुहिक बिज्ञप्ती, सर्बोच्च अदालत माथि दबाबै दबाब !
सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्धामा प्रचण्ड, माधव, ओली देखी थुप्रैले आ आफ्नो पक्षमा प्रभाब पार्न त खोजिरहेकै थिए, जुन पूर्ण रुपमा गलत र भद्दा मजाक थियो नै । ४ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुको बिज्ञप्ती हेर्दा झन निराश भइयो । के सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्धामा यसरी प्रभाब पार्न खोज्नु राम्रो हो र ?? देशका सबै संबैधानिक निकाय पङ्गु बनाउने खेल र झेलमा सर्बोच्च अदालतलाई पनि पार्ने काम भएन र ?? हुन त अदालतमा जब भागबण्डामा दल र नेताका झोलेहरु न्यायाधीश बन्छन त्यहाँ न्यायको के कुरा भयो र तै पनि अदालत पनि यसै गरी बिबादित बनाउने हो भने भोली के हुन्छ हँ ?? चिन्ता बुढी मरिन भन्ने होइन काल पल्क्यो भन्ने हो ! यो त अलि हजम भएन है श्रीमानहरु ! थाहा छैन कुन पाचक खानुपर्ने हो हजम हुन ।